Inona ireo fomba tsara indrindra ahafahana mahazo rindran-damina?
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana manangona saka rohy avy amin'ny fitaovam-pikarohana dia ny famoronana lamosina tsara. Ny olana dia maro ny tompona tranokala, ary koa ny manam-pahaizana SEO, tsy mahafantatra ny fomba hahazoana mivadika rindrina ara-boajanahary. Ny votoatinao dia milalao eo afovoan'ny fanentanana fanentanana, saingy raha tsy manana vondrona mpanaraka mahatoky ianao, ny tranonkalanao dia tsy hanandratra avo ny avo amin'ny SERP satria tsy ho hita maso amin'ny mpanjifa izay mety hitondra fitazonana kalitao ao amin'ny tranokalanao.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fomba fiasa voafaritra tsara ianao mba hahazoana ny rindran-damba tsara indrindra amin'ny tranokalanao raha tsy mamorona votoaty.
Ny fomba tsara indrindra hahazoana rohy mankany amin'ny sehatr'asa
Hitady ny fitenenana rehetra momba ny raharaham-barotra an-tserasera ary mangataha backlinks
Raha manana sehatra efa misy ianao ary ny votoatinao dia vita miaraka amin'ny mpamaky ao an-tsaina, dia mety ho fantatra fa olona iray no nanonona ny tranokalanao ho avoaka. Na izany aza, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, tsy mametraka rohy izy ireo rehefa miresaka olona. Ny tanjonao dia ny mahita ireo voalaza ireo ary mamadika azy ireo ho lasa backlinks. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tompona tranokala na bilaogera izay miantso ny raharahanao amin'ny pejy. Raha mendrika ny tranokalanao izy ireo ary liana amin'ny fifandraisana ara-barotra aminao, dia azo inoana fa hanaiky ny soso-kevitrao izy ireo.
Mba hahitana ireo fanononay momba ny sehatra misy anao dia mety mampiasa fitaovana matihanina isan-karazany toy ny Semalt Website Analyzer na Moz Web Explorer. Ireo fitaovana ireo dia hanampy anao hahita ireo tranonkala rehetra izay niresaka taminao. Azonao atao ny mikaroka amin'ireto fitaovana ireto amin'ny fampiasana tenimiafina na anarana nomena anarana. Azonao atao ny manonona fe-potoana hitadiavana fitenenana vao haingana sy manondrana ny angona azo avy amin'ny format Excel.
Mety hifandray amin'ny tompon'ny tranonkala na bilaogera ianao izay nanonona anao tamin'ny alàlan'ny mailaka na ny tambajotra sosialy.
Azonao atao ihany koa ny maka tombony amin'ny Website Analyzer kaonty tranonkala manokana na vondrona tranonkala mampiasa teny voafaritra manokana momba ny raharaham-barotrao. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana iombonana [[sokajy: Endrika: myv]] [[Catégorie: Anarana iombonana amin'ny teny Endrika: ireo vohikala manan-kaja indrindra eto amin'izao tontolo izao. Izany no antony ahafahantsika mahavita zava-mahagaga ny famerenana ny tsara indrindra amin'ny loharano azo avy amin'io loharano io. Azonao atao ny mamitaka ny rafitra ary mahita ny rohy maty mba hametrahana azy ireo amin'ny rohy mifandraika amin'ny tranokalanao. Fidio ireo lahatsoratra izay misy anao fotsiny. Raha vao mahita pejy Wiki ianao miaraka amin'ny lisitry ny sehatry ny orinasa miaraka amin'ny rohy rava, tsindrio Ctrl + F ary asio rohy maty. Raha te hanolo ny rohy maty miaraka aminao, mila mamorona kaonty ianao ao amin'ny Wikipedia, midira miaraka amin'ity rafitra ity, mahazoa lahatsoratra mifandraika amin'ny rohy, tsindrio ny safidy momba ny fanovana ary manolo ny rohy maty miaraka amin'ny backlink.
Mba hamenoana ity dingana ity dia mandehana any amin'ny faran'ny pejy ary misafidiana ny fizarana "Resaka fanovana. "Eto ianao dia mamaritra fohifohy ny fanovana nataonao ary tsindrio ny bokotra" Io no fanovana tsy dia kely "ary avy eo" mamonjy fanovana ". Izay ihany, ankehitriny ny Wikipedia dia manana rohy malaza eo amin'ny sehatra misy anao, manandrana ny marika eo amin'ny tranonkala Source .